China Nge-PCBA plate mount part abakhiqizi nabaphakeli | UChapman
✭ Le yingxenye yepulasitiki esetshenziselwa ukulungisa ibhodi le-PCBA, ukuze kugcinwe i-PCBA ilinganiselwe futhi iqinisekise ukuzinza kwesiginali yokudlulisa. Izidingo zale ngxenye yepulasitiki ziphakeme kakhulu, futhi ukunemba kwezingxenye zomkhiqizo wepulasitiki kufanele kube ngaphakathi kuka-0.02mm. Ngakho-ke, uma izindawo zokuxhumana eziningana ze-PCBA zilungisiwe, umkhiqizo awunakuba yi-angle esalungiswa, futhi isikhunta kufanele sakhiwe futhi senziwe ngendlela yeSlider.
✭ Izinto zokushisa eziphakeme ze-PC ezisetshenziswa kulokhu okwenziwe ngepulasitiki kuyinto esetshenziswa kakhulu emalambini ezimoto. Le nto inezinzuzo zokuncipha okuncane, ukuzinza okuhle, ukumelana nokushisa okuphezulu nokumelana nokubanda.
✭ Lesi setha sesikhunta sisebenzisa indinganiso yeHASCO. Okubalulekile kwe-Core yinsimbi eqinile engu-1.2343. Isakhiwo isikhunta isakhiwo kuqhathaniswa eziyinkimbinkimbi, badinga ukusebenzisa Faka exchangeable ukukhiqiza izingxenye ezine ezihlukene. Okwenziwe ngumkhiqizo yi-PC, futhi ingaphezulu lidinga ukuba yiPoland eyi-600. Isikhathi sokulethwa kwesikhunta izinsuku ezingama-38, kanti umjikelezo wokujova uyimizuzwana engu-27. Isikhunta sahlolwa kabili kuphela, futhi ikhasimende lasicela ukuthi sihlele ukuthekelisa kufektri yaseJalimane yokubumba umjovo.
Isikhunta CHA. I-CPM-191018
Inqubo Yokuqeda Ubuso IsiPolish- # 600
Izinto zepulasitiki PC
Ingxenye isisindo 1.5 g
Usayizi wengxenye 32.00 X 18.50 X 18.1 mm
Usayizi isikhunta 296 X 346 X 326 mm
Igama Lesikhunta I-Angle buffer
Isikhunta Cavity 1 * 2 (Sebenzisa ukufaka okungashintshana ukuthola izingxenye ezine)
Umgijimi umgijimi obandayo weSide side
Isikhunta Material 1.2343 / 1.2312 / 1.2767
Isikhunta Sokuphila 1,000,000
Isikhathi esiholayo Izinsuku ezingama-38
Isikhunta Isikhathi Sesikhathi: Ama-27's
Le ngxenye yegobolondo lepulasitiki isetshenziswa kakhulu njengokushintsha kwesistimu yokuhamba kwemoto. Igobolondo lokushintsha akumele likhubazeke noma usayizi ungaphandle kokubekezelelana, futhi okokusebenza kufanele kungabi nomlilo futhi kumelane nokushisa okuphezulu. Qiniseka ukuthi ibhodi lethu lesifunda lizinzile futhi akulula ukungena ngaphakathi.
Akunandaba noma yiliphi ibhokisi lokulungisa ibhodi lesifunda, ikhwalithi yesitokisi sethu sepulasitiki yinhle kakhulu. Sizokwenza ukuhlaziywa nokuhlola ngokususelwa kugobolondo le-3D olinikezayo. Ithimba lethu lobuchwepheshe lingahlinzeka ngezinsizakalo zokwandisa imikhiqizo Ngokuhlaziywa kokuqala kobuchwepheshe, singaqinisekisa ukuthi usuku lwethu lokulethwa nekhwalithi ziphelele futhi ziphothulwe kahle.
Langaphambilini Izihlungi zika-Oyili ama-ccessories epulasitiki
Olandelayo: Ibhokisi lephilisi lepulasitiki le-7day
Umshini we-POS wekhadi lesikweletu